Leisure travel is a safe bet for Air France | Airlines
Location: Mbido » Ịdee » Airlines » Njem ntụrụndụ bụ nzọ dị mma maka Air France
Air France ekwuputala mgbatị ahụ n'ime oge oyi nke ihe bụkarị ụgbọ elu naanị site na Paris Charles de Gaulle na Seville, Las Palmas, Palma de Mallorca, Tangier, Faro, Djerba na Krakow.
Ịgba nzọ na njem ntụrụndụ nwere ike inyere Air France aka ịgbake ngwa ngwa.
Ụgbọ elu aghaghị ilekwasị anya na oge ezumike dị elu.
Ndị njem na -achọ ịgbanarị ebe mkpọchi ha.
Betzọ nzọ ụgbọ elu France na ụzọ ntụrụndụ nwere ike ịkpalite mgbake ngwa ngwa maka onye na -ebu ya ka njem ntụrụndụ na -apụ apụ na France mụbara ruo 74.3% na 2020, n'agbanyeghị mmachi na -ebelata ọnụ ọgụgụ njem ọpụpụ.
Ndị ọkachamara ụlọ ọrụ na -arịba ama na, na -egbochi agụụ njem azụmahịa, ụgbọ elu ahụ ga -elekwasị anya n'ije ozi oge ezumike dị elu ma bulie ụlọ ndị adịchaghị elu maka ndị njem mmefu ego iji kwado mgbake siri ike.
Pre-oria ojoo, njem ezumike nke si na France gụrụ 72.1% nke njem mba ofesi na 2019. Mmụba na 2020 na-egosi na agụụ ntụrụndụ nwere ike bụrụ otu n'ime ihe kpatara njem maka oge mgbake ozugbo ka ndị njem na-achọ ịgbanahụ ha. mkpọchi ebe.
Ọzọkwa, ndị ọkachamara ụlọ ọrụ na -ebu amụma na njem ezumike si France ga -ahụ ọnụego uto kwa afọ (CAGR) nke 18.9% n'etiti 2021 na 2025, na -eru nde 34 ntụrụndụ mba ụwa site na 2025. Nke a na -egosi ike ahịa ezumike nwere na nke Air France gbado anya na ụzọ ntụrụndụ ga -etinye onye na -ebu ya n'ọnọdụ siri ike. Mmeghe nke Muscat, Zanzibar, na Colombo, yana ụgbọ elu ndị ọzọ na -aga Miami na Papeete (Tahiti), ebe ntụrụndụ niile lekwasịrị anya, na-ekwughachi nzọ nke onye na-ebu ya na nkwụghachi ike siri ike na njem ntụrụndụ.
Air France ekwuputala mgbatị ahụ n'ime oge oyi nke ihe na-abụkarị ụgbọ elu naanị site na Paris Charles de Gaulle na Seville, Las Palmas, Palma de Mallorca, Tangier, Faro, Djerba, na Krakow.
Site n'ịgbasa ụzọ ndị a ka ọ bụrụ ebe dị ọkụ n'oge oyi (na-abụghị Krakow), Air France na-ekwusi ike na-atụ anya na a ga-achọ ebe ndị a ma ama, nke lekwasịrị anya na ntụrụndụ. Ntuli aka dị ndụ gosipụtara na 41% nke ndị na-aza ajụjụ zuru ụwa ọnụ nwere ike họrọ maka njem mba ofesi gaa n'otu ebe ha na-eleta tupu COVID mgbe mmachi dị mfe. Nyere na ụzọ ndị a dị tupu COVID, ha nwere ike irite uru n'ọchịchọ na-arịwanye elu n'etiti ndị njem ịga leta ebe ndị ama ama. Nke a bụ mmegharị amamihe nke Air France ka ọ na -erite uru na ntinye ego ọzọ site na imeju echiche ahịa dị ugbu a.
Dika ntuli aka dị ndụ, 28% nke ndị na -aza ajụjụ zuru ụwa ọnụ ekpughere na mmefu njem ha amụbaala 'ntakịrị' ma ọ bụ 'ọtụtụ' kemgbe mmalite oria ojoo a. Ndị ahịa a kwesịrị ịbụ ebumnuche ebumnobi maka klaasị azụmaahịa ogologo oge nke Air France.
Onye na-anya ụgbọ elu na-elekwasị anya na ụfọdụ ebe ezumike ogologo oge na-eburu okomoko n'oge oyi a ga-enye ohere zuru oke iji bulie ahụmịhe klaasị azụmaahịa maka ndị njem ezumike, ọkachasị ndị nwere nnukwu ego. Ndị njem azụmahịa tupu COVID bụ ọkpụkpụ azụ nke ego ha na-enweta, mana na-agbada ala, ndị njem ezumike kwesịrị ịbụ ebumnuche ebumnobi. Air France kwesịrị ịkwalite klaasị dị ka mmalite okomoko na/ma ọ bụ kwụsị na ezumike. Site n'iwuli elu na mpempe akwụkwọ ntụrụndụ, onye na -ebu ya nwere ike belata mbibi nke azụmahịa chọrọ, na -echebe onwe ya pụọ ​​na mfu ego ha nwetara.
Air France Business France Miami Paris
Ọrụ ime njem na njem nlegharị anya gbadara ihe dịka 7% na Julaị